ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBemba IsiBhunu IsiBulgaria IsiCatalan IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuganda IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalta IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiQuechua (Sase-Ayacucho) IsiQuechua (SaseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
I-Blue-and-yellow macaw. Ubude: amasentimitha angu-85
KUVELA imibala emihle phezu kwezihlahla ehlathini njengoba kundiza umhlambi wezinyoni! Lo mbukwane okhangayo, wamangaza abahloli bamazwe baseYurophu abafika eMelika Ephakathi naseNingizimu yeMelika ngasekupheleni kwekhulu le-15. Abakubona kwakungopholi, abanesisila eside abatholakala ezindaweni ezishisayo zaseMelika. Kungakabi-phi, izithombe zalezi zidalwa ezinhle, zase zivela emabalazweni ale ndawo njengophawu lwepharadesi elisha elalitholakele.
Opholi beduna nabensikazi banemibala egqamile okuyinto engavamile ngezinyoni ezinemibala egqamile. Labo pholi bahlakaniphile, bathanda ukuba nezinye izinyoni futhi banomsindo omkhulu ohlabayo. Bandiza bewumhlambi wezinyoni ezingaba ngu-30, besuka ezidlekeni zabo ekuseni kakhulu beyofuna okusanhlamvu, izithelo ezimila ezindaweni ezishisayo nokunye ukudla. Njengoba kuvamile ngopholi, lezi zinyoni zivame ukusebenzisa amazipho ukuze zibambe ukudla, bese zikuluma ngoqhwaku lwazo olukhulu olugobile. Zikwazi ngisho nokuqhekeza amagobolondo aqinile amantongomane. Ngemva kokudla, umhlambi uvame ukuya emaweni noma osebeni lwemifula uyodla ubumba, okungenzeka lusiza lezi zinyoni zibulale ubuthi obusekudleni kwazo luphinde luzinikeze amakhemikhali eziwadingayo emzimbeni.
“[UNkulunkulu] wenzé konke kwaba kuhle ngesikhathi sako.”—UmShumayeli 3:11
Lapho upholi usuthole umaqondana uvame ukunamathela kuye ukuphila kwawo konke, futhi bayabambisana ekunakekeleni amaphuphu. Kuye ngohlobo lwabo, lab ’opholi baba nezidleke ezimbotsheni ezisezihlahleni nasezidulini, noma ezimbotsheni nasemifantwini yamadwala lapho bevame ukubonakala becwalana khona. Nakuba amaphuphu esuke esekhule ngokuphelele ngemva kwezinyanga eziyisithupha, ahlala nabazali bawo iminyaka engaba mithathu. Endle lezi zinyoni ziphila iminyaka ephakathi kwengu-30 nengu-40, kodwa lapho zivalelwe ezinye ziye zaphila iminyaka engaphezu kuka-60. Kunezinhlobo ezingaba ngu-18, ezinye zazo ziboniswe lapha.
I-Green-winged macaw, ephinde ibizwe nge-red-and-green macaw. Ubude: bungafika kumasentimitha angu-95
I-Scarlet macaw. Ubude: amasentimitha angu-85
I-Hyacinth macaw. Ubude: bungafika kumasentimitha angu-100. Iwupholi omkhulu kunabo bonke, isisindo sawo singafika kumakhilogremu angu-1.3
Indlela Yokundiza Eyonga Amandla Ye-Wandering Albatross